भारत, लखनउ, २१ जेठ नेपालका पर्यटन व्यवसायीले भारतीय पर्यटन व्यवसायीलाई नेपालमा शान्त वातावरण रहेकाले भारतका पर्यटकलाई ढुक्क भएर नेपाल घुम्न आउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
साउन, काठमाडौं - बुद्ध एयरले पहिलो पटक राजधानी काठमाडौंभन्दा बाहिरको प्रमुख पोखरा विमानस्थलबाट दुई गन्तब्य तथा पर्वतीय उडान (माउन्टेन फ्लाइट) सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
साझा यातायात चढेर ‘काठमाडौं फन भ्याली’ जानेलाई छुटको अफर
काठमाडौं,साउन १९ – भक्तपुरको पलाँसेमा रहेको उपत्यकाकै ठूलो ‘काठमाडौं फन भ्याली’ले ‘ छुटको अफर ल्याएको छ । ‘काठमाडौं फन भ्याली’ले साझाको टिकट देखाएपछि प्रवेशको लागि १ सय रुपैयाँ छुटको अफर ल्याएको हो ।
फेवातालबाट सराङकोट सम्म केबलकार : यसरी निर्माण हुँदैछ (स्केचसहित)
काठमाडौं - पोखराको फेवाताल किनारा देखि सराङकोटसम्म निर्माण हुने केवलकारको निर्माणकार्य सुरु भएको छ । प्राविधिक कार्य जारी रहेकोले आगामी असोज महिनाबाट भने पिल्लर निर्माणको कार्य सुरु हुने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।
१० अर्ब लगानीमा एक दर्जन ४ तारे होटल खुल्दै (सूचीसहित)
काठमाडौं - पछिल्लो समय होटल खोल्ने होड चलिरहेको छ । पाँच तारे होटल मात्रै होइन एक दर्जन चारतारे होटलहरुको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सगरमाथाको उचाइ नाप्न तातियो सरकार, २ करोड बजेट विनियोजन
काठमाण्डु, १ साउन – सरकारले सगरमाथाको उचाइ नाप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सगरमाथाको उचाइ नाप्न सरकारले नापी विभाग अन्तर्गतको खगोल तथा भूमापन महाशाखा हेर्ने उपमहानिर्देशक निरज मानन्धरको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
कृषि, पर्यटन र उद्योगको क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तियलाई राष्ट्रबैंकको कडा निर्देशन
असार १८, काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि, पर्यटन र उद्योगको क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले कृषि, पर्यटन र उद्योगमा
होटलमा थपिँदै २७ अर्ब लगानी, कहाँ–कहाँ बन्दैछन् १० पाँचतारे ?
१२ असार, काठमाडौं - आगामी दुई वर्षभित्र देशमा पाँचतारे होटलको संख्या दोब्बर हुने भएको छ । हाल १० वटा पाँचतारे होटल सञ्चालनमा रहेका छन् भने १० वटा थपिन लागेका छन् ।
२० जेठ, फलेवास (पर्वत) - फलेवास नगरपालिका–१ कार्कीनेटाको रातामाटादेखि कार्कीनेटा बजारसम्मको पदमार्ग निर्माण सुरु भएको छ ।
१२ जेठ, काठमाडौं - यती एयरलाइन्सद्वारा नेपालस्थित युनाइटेड नेसन्ससंगको सहकार्यमा बिहीवार दिर्घकालीन विकास योजनार्थ सामान्य सार्वजनिक जागरुकता अभियानको थालनी गरेको छ
२३ वैशाख, तेह्रथुम - सदरमुकाम म्याङलुङमा हेलिकप्टर अवतरणका लागि हेलिप्याड नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।
विगत वर्षमा दैनिक दुई सयदेखि एक हजारको सङ्ख्यामा दर्शनार्थी आउने गरेका थिए । अहिले दैनिक एक हजारदेखि दुई हजार दर्शनार्थी आउने गरेका ...
गुलरिया (बर्दिया), ६ वैशाख छोटो बसाइँका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आएका बेलायतका मार्टिन बाराले पहिलो दिनमै बाघ देख्नुभयो । नजिकबाट बाघ देख्न पाउँदा उहाँ निकै खुसी हुनुभयो ।
आरोहीको २० समूह सगरमाथाको आधार शिविरमा
तीनवटै हिमालको एउटै आधार शिविर रहेको सगरमाथा आधार शिविरमा आइतबारसम्म पुगेका २० समूहमध्ये १६ समूहले सगरमाथा, दुई समूहले ल्होत्से र दुई समूहले न्युह्त्से हिमालको आरोहण गर्ने सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपिसिसी)का कार्यक्रम अधिकृत कपीन्द्र राईले जानकारी दिए ।